Dhacdo Xanuun Badan :Hooyo Somaliyed Oo Wiilkeeda Ku Weysay Isticmaalka Daawooyinka La Isku Cadeeyo | warsugansomaliya.wordpress.com
Gabar Soomali ah oo magaceeda iyo Magaalada ay ku nooshahay aanan soo bandhigaynin si aan u xafidno Marxaladaha u gaar ah, balse si guud aan u sheegayno in ay ka mid tahay gabdhah ku dhaqan Dalka Holland ayaa waxaa la soo gudboonaaday arrin mugdi galisay nolosheeda kadib markii wiil yar oo ay dhashay uu ka xanuunsaday, markii baaritaan lagu sameeyayna laga helay dhiigiisiisa Kiimiko halis ah oo jar jarta maqaarka jirka baniáadamka.
Dhaqaatiirta oo aad ula yaabay halka ay kiimikada ka soo raacday dhiiga wiilka ayaa ka shakiyay in ilmaha uu cunay qashin kiimikada ay la socotay maadaama uu yahay sanad iyo xoogaa jir hase ahaatee markii ay sii baareen ayay ogaadeen in caanaha naaska ay la socotay kiimikada iyagoo kadibna baaritaan kula dhaqaaqay gabadha dhashay wiilka oo jirkeeda ay ka heleen kiimikada oo xad dhaaf ah.
Gabadha ayaa waaga uu ku baryay markii ay ogaatay in ilmaheeda uu la xanuunsanayo daawo kiimika ah oo jirkeeda ka soo raacay, waxa ayna ogaatay in kiimikada jirkeeda u gudubtay ay tahay daawo ay ku cadeyso maqaarkeeda oo ay isticmaalaysay tan iyo 19 jirkeedii, hadana waa 24 jir.
Waxayna sheekada ku sii xumaatay kadib markii ay u imaadeen qolyaha caruurta ku shaqada leh oo u sheegay in dhaqaatiirta ay ku soo wargiliyeen in aysan sii hayn karin ama sii xanaaneyn karin wiilkeeda maadaama uu u baahan yahay xanaano dheeraad ah oo jirkiisa looga saarayo kiimikadda u raacday naaska ay nuujisay sidaas darteedna laga qaaday wiilkii sanad iyo xoogaa jirka ahaa.
Waxaa kaloo loo sheegay in dhaqtarka ay u tagto siiyo tallooyin la xiriira caafimaadka jirkeeda gaar ahaan maqaarka oo aad u jilcay ilaa heer uusan u dulqaadan karin hawada caadiga ama dabeysha xoogan ee mararka qaar dhacda.
Markii ay dhaqtarka u tagtayna waxa uu u sheegay in iyada xitaa ay u baahan tahay xanaano dheeri ah oo xiliyada isbadelka cimilada aysan ka soo bixin guriga ilaa ay ka dhamaysato daaweyn muddo qaadanayso oo xoogaa lagu xoojinaayo unugyada difaaca jirkeeda si adkeysi loogu yeelo maqaarkeeda.
Waxaa kaloo uu kula taliyay in dadka ay ku dhex jirto ay ka ilaaliso in ay qaadsiiso kiimikada jirkeeda ku jirta waayo waxaa jira nabro yar yar oo meelaha qaar jirkeeda ka soo baxay oo soo daynayo dheecaan kiimikada wata oo xitaa qof kale uu ka gaaro meel jirkiisa ka furan ay u gudbi karto sidaas darteedna ay masuuliyad iska saarto sidii ay u ilaalin laheyn nafteeda iyo nafta dadka kale ee u dhow dhow.
Waxaa sidoo kale uu ku baraarujiyay in daawooyinka ay isticmaashay ay yihiin kuwa aanan ka diiwaan gashneyn dalka oo mamnuuc ka ah sidaas darteedna ay qatar u keeni karto hadii Booliiska ay ku qabtaan.
Gabdha oo kaligeed ku noqotay guriga ay degan tahay ayaa waxaa halkaas ka soo waday gabdho kale oo Soomaali ah oo u cabsaday nolosheeda maadaama ay waysay cunigeeda odaygeedana uusan la joogin sidaas darteed hada waxa ay la joogtaa gabdhaha kale oo go,aan ku gaaray in sheekada ay baahiyaan si gabdhaha Soomaalida ee cadeeya midabkooda ay u ogaadaan qatarta ay keeni karto daawooyinka aanan dheeli tirneyn ee Maqaarka lagu cadeeyo.
Gabadha dhibka uu ku dhacay waa gabar ilaa xad wanaagsan diin ahaan dhaqan ahaanba, mana jiraan waxyaabo kale oo looga qaatay wiilkeeda marka laga reebo arintaan mucjisada ah ee sida lama filaanka ah ugu dhacday.
Dalka Nederland, waxa uu ka mid yahay dalalka Midowga Yurub ee mamnuuca ka ah isticmaalka daawooyinka la isku cadeeyo, iyadoo daawooyinka kiimikada dalka lagu soo geliyo si sharci daro ah, waxaana dhaqaatiirta ay ka digeen halist ay u keeni karto Caafimaada iyo Degaanka.
May 16, 2013 in Faalooyinka iyo Arimaha bulshadda, Home.
← 5 jir Magan-galiyo Siyaasadeed Dalbanaya !! Yaab Yaabkiisa
waraysi dhinacyo badan taabanay oo ka waramay qaabka somalidu ku soo gasho wadankan greece daawo. →